होली कोसँग खेल्न चाहनुहुन्छ ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः फाल्गुन २५, २०७६ - साप्ताहिक
होली कोसँग खेल्न चाहनुहुन्छ ?
फाल्गुन २५, २०७६
होली हिन्दूहरूको एउटा विशेष चाड हो । रंगी–बिरंगी रंगहरू एक–अर्कालाई लगाएर यो चाड मनाउँदा छुट्टै किसिमको मज्जा आउँछ । त्यसैले यसपालिको होली पनि एकदम रमाइलो गरेर मनाउने तयारीमा छु । सदाझैं विभिन्न ठाउँमा होली विशेष मेरो प्रस्तुति रहनेछ । धेरै ठाउँबाट कार्यक्रमका लागि निमन्त्रणा पाएको छु, हजारौं दर्शकसँगै नाचेर, नचाएर रमाइलो गर्दा मनमा बेग्लै खुसी मिल्छ । त्यसैले यसपालिको होली दर्शकहरूसँगै खेल्ने तयारीमा छु ।
कृष्ण काफ्ले, गायक
ओली बासँग मनाउन चाहन्छु, किनभने अब उप्रान्त भ्रष्टाचारिताको सपोर्ट नगरून् भनेर ।
दमन रूपाखेती, हास्य अभिनेता
होली मलाई मन पर्ने चाडमध्येको एक हो । विशेष गरी हाम्रो परिवारमा होली खेल्ने एउटा छुट्टै परम्परा छ । सर्वप्रथम होलीको सुरुवात भगवान्लाई होली चढाएर हुन्छ । भगवान्पछि आफ्नो परिवारका मान्यजनलाई होली चढाउन लगाएर ढोग गर्ने चलन छ । त्यसपछि सम्पूर्ण परिवारका सदस्य तथा साथीभाइसँग रमाइलो गर्दै होली मनाइन्छ । सधैंझैं यसपटक पनि यही सिलसिलालाई निरन्तरता दिने योजना छ । होली भनेको एउटा आपसी सद्भाव, माया साट्ने चाड हो ।
इतु जोजिजू, गायिका
सधैंझैं म पोखरा गएर होली आफ्नै साथीभाइ र परिवारका सदस्यहरूसँग खेल्ने विचार गर्दैछु ।
राजु गिरी, निर्देशक
होलीका दिन बिहान घरमा परिवारका सदस्यहरूसँग खेल्छु अनि दिउँसो साथीभाइहरूसँग कुनै होली इभेन्ट्मा जाने कार्यक्रम छ । होली भन्ने पर्व नै आफ्नो नजिकका मान्छेहरूसँग रमाइलो गरी मनाइने पर्व हो जस्तो लाग्छ ।
मनिष शाक्य, कोरियोग्राफर
रंगीन सांगीतिक प्रेम अनि सद्भाव बाँड्नका लागि म यसपटकको होली नेपाली संगीतप्रेमीहरूसँग मनाउने योजनामा छु ।
कमल के क्षेत्री, गायक
मैले यसपटकको होली नमनाउने योजना बनाएको छु । विश्व नै कोरोना भाइरसको चपेटामा छ । मेरा केही साथी नै संक्रमित भएको अवस्था छ ।
रेश मरह्ट्ठा, अभिनेता
यसपटकको होली कसरी मनाउने भनेर सोच्दैछु ।
नयाँ चलचित्रका लागि कलाकारहरूको वर्कसप चलिरहेको छ, तिनै कलाकारहरूसँग होली मनाउने कार्यक्रम छ ।
रेशराज आचार्य, निर्देशक
कोसँग खेल्ने भन्ने छैन । यसपटकको होली खेल्न अलि सोच्नुपर्ला जस्तो छ । कोरोना...भीडभाड...यस्तै–यस्तै ।
सरिता लामिछाने, अभिनेत्री
तपाईंहरूसँगै होली खेल्ने हो, बरु कहाँ मनाउँदै हुनुहुन्छ भन्नु होला है ।
अमिर बज्राचार्य, मोडल
होलीको रंगलाई मैले जिन्दगीकै रंगसँग तुलना गरेकी छु । वर्षमा एकपटक आउने होली सप्तरंगी रंगहरूको समेत प्रतीक हो । त्यसैले यो विशेष पर्व म आफूले माया गर्ने तथा आफूलाई माया गर्ने साथीभाइ, परिवारका सदस्यहरूको वरपर रहेर मनाउन चाहन्छु ।
हेमा मानन्धर, इभेन्ट म्यानेजर
होली मनाउनका लागि साथीहरूले विशेष तयारी गरिरहेको जानकारी पाएको छु । यसपटकको होली आफ्ना साथीहरूसँगै रमाइलो गरेर मनाउने तयारी गरेको छु ।
अशोककुमार श्रेष्ठ, कराँते प्रशिक्षक
एउटा नयाँ केटी साथीको खोजीमा छु अनि उहीसँग रङ दल्दै खेल्ने तयारीमा हो । लगभग साथी पनि भेटेको अवस्था हो ।
शोभित बस्नेत, निर्देशक
म यसपटक होली खेल्दिनँ । किनभने यस वर्ष यो भाइरल भइरहेको कोरोनाभाइरसले गर्दा यस वर्ष घरमै बस्नेछु ।
सुशीला पाठक, गायिका
होली नै नखेल्ने ।
धेरै पछि यसपटकको होली तराईमा रहेको पुरानो घर र परिवारका सदस्य तथा मेरा पुराना साथीसँग खेल्ने तयारी छु । कलेजदेखि स्कुल र मोफसलमा काम गर्दाका मित्रहरूसँग होली नखेलेको लामो समय भएकाले आत्मीयतालाई अझ पुनर्ताजगी गराउने रहर छ ।
होली त हामी सिने इक्युपमेन्ट हाउसमा खेल्ने हो आफ्नै साथीभाइसँग । आफ्नै साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने । हरेक वर्ष हाम्रो यही हो ।
वसन्त निरौला, निर्देशक
म मेरो शुभचिन्तक सुकमित घिसिङसँग होली खेल्ने योजनामा छु ।
डीबी बम्जन, कलाकार
मेरो लोअर ब्याक दुखेर यसपटक होली खेल्न पाउँदिनँ ।
दिव्य देव, नाट्यकर्मी
होली साथीहरूसँग खेल्न चाहन्छु । किनकि साथीहरूसँग जति मज्जा र आनन्द अरू कोहीसँग हुँदैन ।
जीबी गजल, विद्यार्थी नेता
होली पर्व रंग र खुसीको पर्व हो । यो पर्वले आपसी सद्भाव, आपसी एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम गर्छ । त्यसैले यो खुसीको रंगमा परिवार, साथीभाइ र आफन्तहरूसँग रंगिन चाहन्छु ।
आदित्य बुढाथोकी, मोडल, निर्देशक
होली म आफ्नो परिवार र नजिकका इष्टमित्रसँग मनाउन चाहन्छु । किनकि आफूनजिकका सँग खुलेर रमाइलो गर्न सकिन्छ । आफूलाई बुझ्ने भएकाले रंग लगाउँदा रिसाउलान् भन्ने डर पनि रहन्न । चाडबाडले लामो समयदेखि टाढा भएकाहरूलाई भेट्ने अवसर पनि जुराउँछ, जसले सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउँछ ।
हिमांशु रायमाझी ‘गोधूलि’, गीतकार
म परिवार तथा साथीभाइसँग होली खेल्छु । परिवार र साथीभाइसँग खेल्दा सभ्य होली खेल्न पाइन्छ ।
खुश्बु खड्का, अभिनेत्री
सम्माननीय व्यक्तित्व भएकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग खेल्न चाहन्छु ।
लबबहादुुर कार्की, इभेन्ट आयोजक
परिवार र साथीभाइसँग खेल्छु । परिवारको धेरै सदस्य तथा साथीभाइसँग भेटेर रमाइलो गर्ने र सौहार्दता बाँड्ने मौका मिल्ने भएकाले होला सायद । यो वर्षचाहिँ कोरोना भाइरसको आतंकले अलिक डर लागेको छ । अलिक सतर्क भएर नै खेल्नुपर्ला ।
लिना रेग्मी, अध्यक्ष, विन्ध्यवासिनी म्युजिक
होली भन्नेबित्तिकै विजयी रङहरू र सद्भावको पर्व । सधैंझैं यसपालिको होली म आफ्नो घरपरिवार, छरछिमेक र साथीभाइसँग खेल्ने योजनामा छु ।
रंगको पर्व होली भन्नेबित्तिकै आफ्नो बाल्यकालको स्मरण हुन्छ । तराईमा प्राय: ‘होलीले मेरो रंगायो’ भन्ने गीतको तालमा भाङ खाँदै खुबै रमाइलो गरिन्थ्यो । यदि सम्भव भए सो गीतका कलाकार राजेश हमाल, कृष्टि मैनाली अनि मिथिला शर्मासँगै अग्र्यानिक रंगले रंगिँदै मनाउने थिएँ होला ।
अजय मल्ल ठकुरी, निर्माता
म अक्सर होली घरमै परिवारसँग खेल्न मन पराउँछु । कुनै न कुनै बहानामा साथीहरूसँग त अक्सर रमाइलो गरी नै रहेका हुन्छौ । घर–परिवारसँग दिनभर उचित र गुणस्तरीय समय व्यतीत गर्ने यो मेरो उत्तम पर्व र अवसर पनि हो । यो दिन म आफै स्वादिष्ट परिकार पनि बनाउँछु ।
मोहनकृष्ण श्रेष्ठ, निर्माता
होली म एउटा भाइचाराको सम्बन्ध गाढा बनाउने पर्वलाई लिन्छु । यसको कारण अरू केही होला, त्यसकारण जो–कोहीसँग पनि खेल्छु । बिना उच्छृंखल सौहार्दपूर्ण वातावरणमा होली खेल्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।
दीपेन्द्रराज शाक्य, उद्यमी
म जिन्दगीको कुनै एउटा होली गायक उदितनारायण झासँग खेल्न चाहन्छु, किनकि म बाल्यकालदेखि नै उहाँका गीत र त्यो मखमली आवाज सुन्दै संगीतप्रति आकर्षिक भएको व्यक्ति हुँ ।
मानस राज, गायक
साथीहरूसँग होली खेल्छु । धेरै रमाइलो हुन्छ ।
मिलन गीता श्रेष्ठ, गायक
नेपालमा हुँदा परिवार र साथीहरूसँग खेल्थें अनि राधाकृष्ण मन्दिर गएर पूजा गर्थें । तर, यहाँ युकेमा चाहिँ खेल्न नपाउँदा बोर लाग्छ ।
दुर्गा घले थापा मगर, निर्मात्री
म यसपालिको होली नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग खेल्न चाहन्छु । किनकि उहाँले यो देशलाई नयाँ ठूलो योगदान दिनुभएको छ । देशलाई नयाँ दिशातर्फ लाँदै हुनुहुन्छ । त्यही भएर उहाँसँग यो उत्सव मनाउन चाहन्छु ।
वसन्तराज रिजाल, कलाकार
भद्र, सालिन किसिमले होली खेल्ने साथीहरूसँग यो वर्षको होली मनाउँदैछु । किनकि बाहिर गएर खेल्दा खाने–पिउने, जथाभावी रंगहरू दल्ने गलत प्रवृत्ति हो । तर, नजिकका साथीभाइ, इष्टमित्रहरूसँग मिलेर खेल्ने हो ।
विनोद ढकाल, गायक
आफ्नै साथीभाइ, संगिनीहरूसँग होली खेल्छु । सांगीतिक माहौलमा रमाइलो पनि हुने भएकाले होली निकै मन पर्छ ।
विप्लवमान सिंह, पूर्वअध्यक्ष, क्यान
परिचित र होलीको महत्व बुझेकाहरूसंग मात्र सप्तरंगी रंगमा खेल्न चाहन्छु ।
रेखा शाह, गायिका
होलीको रंग तथा अबिरले गलामा प्रभाव पार्ने भएकाले प्राय: होली खेल्दिन । खेल्नै परे नजिकका साथीहरूसँग मात्र सुरक्षित तरिकाले खेल्छु ।
बानिका प्रधान, गायिका
चितवनको नारायणगढमा आफ्नै बाल्यकालका साथीहरूसंग होली खेल्दैछु । पुराना साथीहरूसंग होली खेल्दाको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ ।
दीपक खाँड, निर्देशक
म त मधेशको ज्वाईं, पहिला त घरमै श्रीमती तथा परिवारका सदस्यहरूसंग खेल्छु, त्यसपछि मात्र साथीभाइसँग ।
साथीभाइहरूसँग बसेर, रंग दलेर, रमाइलो भेटघाट गरेर होली मनाउने योजना छ ।
अर्जुन पोखरेल, संगीतकार
होली आफ्नो परिवार अनि साथीभाइसँग खेल्न चाहन्छु । होली आएपछि कार्यक्रमहरूमा जानैपर्छ । मेरो पहिलो रेकर्डेड चलचित्र गीत नै फागु चलचित्रको होली गीत हो, त्यसैले पनि मलाई होली विशेष लाग्छ । मलाई होली आएपछि यो गीतमा दर्शकसँग रंग लगाएर सँगै नाच्न रमाइलो लाग्छ ।
मीना निरौला, गायिका
प्रकाशित :फाल्गुन २५, २०७६
सदावहार होली गीत
फागुन २३ देखि २९ गतेसम्मको राशिफल
करिश्माको होली खर्च स्वर्गीय भट्टराई परिवारलाई सहयोग
तपाईंलाई कोसँग सेल्फी खिच्न मन छ ?
अहिलेसम्म हिउँ खेल्न कहाँसम्म पुग्नुभएको छ  ?
डाउनलोड बिना खेल्न मिल्ने अनलाइन गेम
एसएलसी दिँदाको रमाइलो अनुभव के छ ? चैत्र ७, २०७६
कोरोना भाइरसबाट बच्न के उपाय अपनाउनु भएको छ ? फाल्गुन ३०, २०७६
तपाईंलाई कोसँग सेल्फी खिच्न मन छ ? फाल्गुन १६, २०७६
शिवरात्रिमा गाँजा खाएको अनुभव छ ? फाल्गुन ९, २०७६
भ्यालेन्टाइन डे कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ? फाल्गुन २, २०७६
सीमा नाकामा पुस्तक रोकिनुलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ? माघ २५, २०७६
नयाँ सभामुखलाई तपाईंको सुझाव के छ ? माघ १७, २०७६
सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने विधेयक लागू भयो भने के होला ? माघ १०, २०७६
तपाईंले पछिल्लो समय हेरेको चलचित्र कुन हो ? कस्तो लाग्यो ? माघ ५, २०७६